Ndiri mukadzi ane makore 20
You are at:Home»Blogs»Tishamwaridzane»Ndiri mukadzi ane makore 20
By Munyori weKwayedza on	 October 31, 2014 · Tishamwaridzane
MAKADII veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 23 nemwana 1 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora, handina chirwere. Vanofarirawo nezvangu munondibata pa0783 401 595.
Ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ane makore 22 kusvika 29 anoshanda. Ari negative ngaandibate pa0779 826 016.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvakawo musikana wokuroora ane makore 18 kusvika 22 ari pachokwadi uye anotya Mwari. Anoda ngaandibate pa0736 440 291.
Ndiri murume ane makore 60 ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 45 zvichikwira. Ndibatei pa0778 880 434.
Ndiri mudzimai ane makore 25 ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye ane makore 30 zvichikwira. Vane vakadzi kwete, anoda ndibate pa0783 655 347.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 2 ndiri kutsvagawo murume anoda zvemusha akavimbika. Munondibata pa0777 499 236 kana kutumira sms.
Ndiri mukadzi ane makore 23 ndinoda murume asiri pamushonga, ngaandibate pa0778 907 559.
Ndiri murume ane makore 39 ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 38 zvichidzika anoda zvekuroorwa. Ndibatei pa0775 592 337.
Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana mumwe, ndiri HIV+ uye handisati ndave pamushonga. Ndinoshanda muHarare, ndinodawo murume ari pachokwadi ari positive asingataridzike kurwara ane makore 30 kusvika 36. Vanoda ndibatei pa0774 082 367.
Ndiri murume ane makore 33 ndinoda mukadzi ane makore 40 zvichidzika. Anoda kuenda kunotorwa ropa ngaandibate pa0782 205 029.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndinonzi Valle ndine makore 32 uye ndakamboroora saka ndinodawo mukadzi ane mwana mumwe chete. Ndiri builder, ndinodawo mupurisa kana musoja. Nhamba dzangu idzi 0779 933 058.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndiri kutsvaga musikana akanakawo ane makore 18 kusvika 22 mutsvuku. Vanoda ndibatei pa0774 440 218 asi vanoda kutambisa nguva kwete.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo wekuroora ari pachokwadi handisati ndamboroora. Ane chirwere kwete handidi, ndibatei pa0783 278 779.
Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 29 chero ane mwana mumwe. Handina chirwere anoda ngaandibate pa0775 972 373.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 40 zvichidzika. Ndinoshanda, nhare dzangu idzi 0782 205 029.
Ndiri murume ane makore 39 nevana vaviri ndinozviitira mabasa emawoko uye ndiri HIV negative. Ndinotsvaka mukadzi ane makore 26-39, anosevenza muHurumende asina kana ane vana. Handinei nekuti ane utachiona hweHIV, fonai pa0777 821 290.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa0783 278 779.
Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika. Nhare dzangu 0715 598 135, ndiri kuMasvingo.
Makadii zvenyu? Ndiri murume wemakore 41 ndiri negative uye ndinotsvagawo mudzimai ane makore 30 zvichidzika anoda zvemba. Ndinogara kuChitungwiza, vanoda vari HIV negative ngavandifonere pa0715 641 998.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 21 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa0783 278 779.
Makadii? Ndakambonyorerawo kuchirongwa chino asi handina kuwana wandaida, ndine makore 33 nemwana 1 uye ndinoda murume asina mukadzi asinganwe doro. Ndiri kuSouth Africa, nhamba dzangu idzi 0834 355 459 asi matsotsi kwete.
Ndiri murume ane makore 25 ndinotsvagawo shamwarikadzi yekushamwaridzana nayo yakarongeka ine mazirudo. Akanaka ngaandibate pa0738 135 037.
Ndine makore 31 ndinotsvakawo mukadzi mupfupi akasimba zviri pakati nepakati akadzidza kana anoita basa remawoko anoda zvemba ane makore 26 zvichidzika. Asina utachiona hweHIV ngaandibate pa0733 947 070.
Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana vatatu uye ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi ari HIV negative anoziva Mwari. Anoda zvekuroora nekuchata ane basa rakanaka aine makore 38 zvichienda mberi ngaandibate pa0717 386 671. Macalll back nevarume vevanhu kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvagawo mukomana ane makore 21 – 28 anonamata asina chirwere. Anoshanda anondifarira ngaandibate pa0771 796 341.
Ndiri mukadzi ane makore 33 ndinotsvaka murume anoda zvekuroora ane makore 42 zvichikwira. Ini ndinoita zvekuhodha ndichitengesa ndinodawo murume anoshanda ari pachokwadi. Vanoda zvekutamba chimbomirai, nhare dzangu idzi 0739 631 129.
Ndinotsvagawo murume ane makore 33-40 ari HIV negative. Ndine makore 29 nemwana 1 nekudaro murume wacho ngaave nevanawo vake uye achishanda. Nhamba dzangu +27 835 082 870.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinoda musikana ane makore 18-20 anoda zvemba ari HIV negative. Nhamba dzangu 0737 364 914 asi call back kwete.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi ane makore ari pasi peangu ane zvaanoita, anonamata, anoda zvemba. Ngaave anoda hupenyu hwekumusha nekudhorobha. Vanoda ndibatei pa0739 293 983, ndaneta nekuwana matsotsi. Ndiri paWhatsApp.
Ndiri murume ane makore 43 nevana 5 ndiri kutsvagawo mukadzi anotya Mwari uye anoshanda kunyangwe basa remawoko. Ini ndiri mushandi weHurumende, ndibatei pa0717 155 983.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1 ndinotsvakawo murume ane makore 28 kusvika 34. Vari pachokwadi ndibatei panhamba dzinoti 0779 634 989 kana kutumira sms, ndatenda.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 33 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi anoda kuroora. Vanenge vandifarira ndifonerei pa0779 813 491.
Ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa nevana 3, ndiri positive asi handitaridzike. Ndinotsvagawo murume ane makore 32 kusvika 40. Vanoda ndibatei pa0783 532 403.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinogara muHarare uye ndinotsvaga shamwarisikana ine makore 18 kusvika 19 yekuronga nayo zvemba. Ndakapedzawo kuita kosi yehukoti muna Nyamavhuvhu. Anopinda chechi yeJohane Masowe anoda ngaandibate pa0775 456 893, call me back kwete.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi ane makore ari pasi peangu. Anoda ngaafone pa0736 149 341.
Ini ndiri murume ane makore 24 ndiri kutsvagawo mukadzi wokuroora akavimbika anoda zvemusha. Ndinoshanda saEngineer uye ndine imba nemotokari. Ndinoda anoshandawo, anoda ndibatei pa0783 408 087.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinoshanda uye ndine zvinhu zvangu. Ndinotsvaga musikana ane makore 18 – 19 asi kwete mukadzi wemunhu. Anoda ngaandibate pa0771 857 934 kana call me back ndinoida.
Ndiri murume ane makore 35 nemwana mumwe uye ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25 kusvika 30 ane mwana mumwe kana 2. Anoda nhare dzangu idzi 0782 131 019.
Ini ndiri mukadzi ane makore 33 ekuberekwa ndinotsvagawo murume anoda zvekuvaka musha. Ndinoda ari positive uye anoshandawo. Vanondida ndibatei pa0772 950 555.
Makadii zvenyu kwese-kwese?
Ndiri mudzimai ane makore 34 nevana 2, ndiri HIV positive asi handitaridze kurwara. Ndinotsvagawo murume ari positive anogeza asina hutsinye, asina mukadzi. Ndinoda anoshanda nekuti ini ndinomira- mira kushandira mhuri.
Andifarira ngaandibate pa0715 213 235, vanorevesa kwete vanotamba nevana vadiki.